Gallio, Veneto, i-Italy
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Lara
I-mansard ethokomele lapho kuhlangana khona isiko nesimanje, kufakwe ngendlela evamile nesebenzayo kubahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Itholakala endaweni emaphakathi nendawo enamasu: ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka enkabeni ye-Gallio nezindlela zayo eziyinhloko, imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka esikhungweni sesici sase-Asiago kanye nemithambeka yakhona eyinhloko yokushushuluza.
Iphawuleka ngesitayela se-rustic, esinemishayo eveziwe kanye nefenisha ejwayelekile ye-'50s, le mansard emangalisayo ilungele noma yiluphi uhlobo lwesihambi.
Kukhona igumbi elinombhede wosayizi wendlovukazi, elithokomele ngokwedlulele futhi elinethezekile, kanye nombhede osofa ophindwe kabili othokomele otholakala egumbini lokuhlala ozokuvumela ukuthi uhlale ngokuthula kubantu abaningi, kungakhathaliseki ukuthi uyiqembu labangane noma umndeni. Nokho, intengo ephansi, iyenza iphelele ngisho nakubahambi abangabodwa noma abashadikazi.
Ngaphezu kwamathawula osayizi abahlukahlukene, kuzoba namashidi, izingubo zokulala namaduvethi onawo.
Kukhona ikhishi elitholakala endaweni yokuhlala ene-minibar, isitofu se-4 burner, i-microwave, i-toaster, iketela nomshini wekhofi; kukhona futhi amaphilisi ekhofi kanye namatiye ahlukahlukene ukuze avumelane nakho konke ukunambitheka. Ngamafuphi, konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kuphelele.
Indawo yomlilo ikhanyisa futhi ifudumale imvelo kanye nomkhathi, okwenza ukuhlala kwakho kwamukeleke nakakhulu, kuyilapho usuka ethafeni ungakwazi ukujabulela umbono omangalisayo wesigodi esiluhlaza (noma esimbozwe yiqhwa!) esibanzi kakhulu.
Igumbi lokuhlala elithokomele linombhede kasofa onethezekile kanye ne-32" HD LED TV (Ukulungiswa: 1366 x 768 pixels Digital Terrestrial Tuner: DVB - T2E Satellite DVB - S2 - Izipikha ezakhelwe ngaphakathi) ifakwe FIRE TV Stick ezovumela ukuze ujabulele ngokuthula amafilimu akho owathandayo, amadokhumenti nochungechunge lwe-TV ku-Netflix, i-Amazon Prime, i-YouTube nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ozikhethele.
Indlu yangasese enefasitela inikezela ngeshawa, zonke izingxenye zenhlanzeko kanye Nekhithi Yokwamukela yamahhala ehlinzekwa yindlu (eneshampoo, i-conditioner kanye neshawa yokugeza). Kukhona nesibuko esikhanyisiwe, okomisa izinwele kanye namakhompathi ehlukene okuthwala zonke izinto zakho.
IGallio, etholakala enyakatho-mpumalanga ye-Asiago (eqhele ngamakhilomitha angu-4 kuphela), ingesinye sezikhungo ze-“Altopiano dei Sette Comuni” ezinemidlalo eminingi nezivakashi ezikhangayo, ehlobo nasebusika.
Ikakhulukazi, phakathi nenkathi yasebusika ungakwazi ukujabulela i-alpine ski slopes "Melette 2000" kanye ne "Valbella", eseduze nendawo yedolobha, kanye ne "Centro Fondo Gallio" eCampomulo, ebonakala ngamakhilomitha angu-150 emithambeka ye-Nordic ski. Kulabo abathanda i-ski jumping, e-Pakstall kukhona "i-Valle dei Trampolini", phakathi kwayo ongayithanda i-K95 edumile: i-trampoline ephakeme kakhulu e-Italy, lapho imincintiswano yamazwe ngamazwe yayibanjwe khona. Singakhohlwa ukuthi kungenzeka ukukhithika isikhathi eside eqhweni.
Phakathi nazo zonke ezinye izinkathi zonyaka, izimfunda eziluhlaza nezibanzi kanye namahlathi aluhlaza anikeza amathuba ahlukahlukene okungcebeleka: kunezindlela eziningi zohambo oluzungezwe imvelo, ezihanjwa ngezinyawo, ngehhashi kanye nangebhayisikili lezintaba, ukuze uthole izindawo zepharadesi langempela. Kubathandi bomlando, kukhona nemizila eya ezindaweni zeMpi Enkulu: eminingi yale mizila ilandela amathrekhi omnyuzi akhiwa amasosha phakathi neMpi Yezwe Yokuqala.
Ngamafuphi, leli kungaba iholide elifanele konke okuthandayo. Ngibheke ngabomvu ukukubona!
Hlola ezinye izinketho ezise- Gallio namaphethelo